सहरका ​सडक विस्तार असारभित्र सक्न निर्देशन जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
बिहिबार ८ असोज, २०७७ | Thursday, September 24th, 2020
सहरका ​सडक विस्तार असारभित्र सक्न निर्देशन
शुक्रबार २० चैत, २०७१
जनबोली/ काठमाडौं, २० चैत – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले काठमाडौं उपत्यकामा भइरहेको सडक बिस्तार तथा सुधारको काम २०७२ असार मसान्तभित्रमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ । सरकारका मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा बिहीबार बसेका सडक विस्तारसँग सम्बन्धित निकायका जिम्मेवारी पदाधिकारीहरुको बैठकमा यस्तो निर्देशन दिइएको हो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदी र सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुन कार्की पनि सहभागी थिए । त्यस्तै सडक विस्तारसँग सरोकार राख्ने नेपाल बिद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, काठमाडौं‚ ललितपुर र भक्तपुर नगरपालिका, काठमाडौं उपत्यका सडक विकास प्राधिकरण, सडक विभागलगायत सरोकारवाला निकायमा प्रतिनिधि उपस्थित थिए ।
बैठकमा उपत्यकाभित्रका सडक विस्तारसँग सम्बन्धित प्रगति समीक्षा, समस्याहरुको विश्लेषण र आगामी दिनमा सडक विस्तार र सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामका बारेमा समीक्षा भएको सचिव सुवेदीले बताए ।
बैठकमा मुख्य सचिव पौड्यालले सडक विस्तारसँग सम्बन्धित निकायबीच समन्वयको कमी देखिएको भन्दै व्यवस्थित समन्वय प्रणाली कायम गर्न निर्देशन दिए ।
सचिव सुवेदीका अनुसार सडक विस्तारको कार्यमा अन्तरनिकाय समन्वय गरी सबै निकाय एकै ठाउँमा बसी निर्माण कार्य अघि बढाउन क्षेत्रीय सडक निर्देशकको संयोजकत्वमा रहेको कार्यसम्पादन समितिलाई सक्रिय बनाई समन्वयात्मक रुपमा निर्माण कार्य अगाडी बढाउन एवं सडक विस्तारको कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले गरेका निर्णय
काठमाडौं उपत्यकाभित्रको सडक विस्तार र सुधारको काम २०७२ आषाढ मसान्त सम्म सम्पन्न गर्ने ।
मेलम्चीको पानी वितरणको लागि पाइप विछ्याकउन आवश्यक सडक खन्न सडक विभागले सहमति दिने र आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले पाइप विछ्याए पछि तत्काल सडक पुननिर्माण गर्ने । यो कार्य शीघ्र सम्पन्न गर्ने । लामो समय सडक खनेर नराख्ने ।
विद्युत र दूरसञ्चारलगायतका सार्नुपर्ने पोल तथा तारहरु एक हप्ताभित्र सम्बन्धित निकायले सारेर सडक क्लियर गर्ने ।
सडकमा रहेका सौर्य उर्जाबाट संचालित बत्तीहरुको नियमित चेक जाँच गर्ने । विग्रिएको देखिएमा तत्काल मर्मत गर्ने र जडान गर्न बाँकी ठाउमा तत्काल जडान गर्ने ।
सडक विस्तार र अतिक्रमण खाली गर्ने क्रममा कसैको दवावमा नपरी जिम्मेवारी भई सरोकारवाला निकायले तदारुकताका साथ काम गर्ने ।
सडक छेउछाउ निर्माण गर्नुपर्ने पेटी लगायतको बाँकी काम यथासक्य छिटो सम्पन्न गर्ने ।
बनाउनु पर्ने ढल निकास लगायतका कार्य सम्बन्धित निकायले यथासक्य छिटो र समन्वयात्मक तरिकाले सम्पन्न गर्ने ।
आकासे पुल नजिक रहेका जेब्रा क्रसिङ हटाउने र पुलबाटै आवतजावत गर्ने व्यवस्था मिलाउने । पुलको नजिकका सडकतर्फ जाने खुल्ला ठाउँमा तत्काल रेलिङ बनाउने ।
निर्माणको क्रममा उपत्यकाका खोला नालामा मिल्काइएका माटोलाई खोलाको वहाव यथावथ रहने गरी व्यवस्थापन गर्ने । हटाउनुपर्ने माटो बाहेक अरु माटो उचित ठाउँमा लागि व्यवस्थापन गर्ने ।
सडक विस्तारको क्रममा क्षतिपूर्ति पाउने घरहरुको हकमा चालु आ।ब।कै दररेट अनुसार क्षतिपूर्ति दर कायम गर्न सहरी विकास मन्त्रालयले प्रकृया बढाउने ।
उपत्यकाको नदि नालाको वहाव क्षेत्रलाई कुनै असर नपर्ने गरी मात्र विकास निर्माणका कार्य गर्ने गराउने ।
माइतीघर–तीनकुने सडकको सौन्दर्य विरुवा स्याहार र सुन्दरताको काममा नेपाल टेलिकमले तदारुकता दिने । ओइलाएका एवं मरेका विरुवालाई प्रतिस्थापन गर्ने र नियमित रुपमा पानीले सिंचित गर्ने ।
सिनामंगल-भिमसेनगोला-माइतीघर-रत्नपार्क सडकमा खानेपानीको पाइप विछ्याउने कार्यसम्पन्न भएकोले शिघ्र सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने ।
लैचचौर-सोह्रखुट्टे-बालाजु खण्डको सडक छेउछाउका पोल तथा तारहरु तत्काल हटाई छिटो भन्दा छिटो सडक पीच गर्ने ।
आफ्नै ८ वर्षीया छोरीमाथी बाबुले बारम्बार जब सोच्नै नसक्ने हर्कत गरिरह्यो
बिहिबार ८ असोज, २०७७
‘अब बृद्धभत्ता पाँच हजार’
खानीडाँडा र थामखर्क विमानस्थलमा शनिबारदेखि नियमित उडान
नाइटक्लबहरू यसरी खचाखत भरिन थाले [ फोटो फिचर ]
उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाबीच अचानक अवस्था तनावग्रस्त
भारतको सबैभन्दा ठूलो ग्याँस कम्पनीमा भीषण आगलागी, आकाश नै रातो भइरहेको छ
एकाबिहानै शक्तिशाली भूकम्पको धक्का, मान्छेहरुको भागाभाग
यस्तो छ फेरी देशभरी कठोर लकडाउनको सम्भावना
यसकारण मानिस भगवान शिवको गलामा टाँसिएको यो सर्पलाई दुख दिने सोच्नपनि सक्दैनन् !
कोरोनाले रोकिएका परीक्षा बारे त्रिविले जारी गर्यो यति महत्वपूर्ण जानकारी
छ जना सवार गुडिरहेको जिप बाढीले बगायो
बारामा भारतिय नागरिकले जे गरे थाहा पाउँने सबै चकित !
सावधान : यी क्षेत्रमा अति भारी वर्षा, यस्तो विपद आइलाग्नसक्छ !
बेलायतमा गाईले हा’नेर शिक्षकको मृत्यु
एक जना कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु
अति नै पवित्र छ बागलुङ कालिका मन्दिर, कालिगण्डकीका नौ धारा देखेमात्र सोचको फल प्राप्त
चन्द्रमा धनु राशिमा गोचर हुँदा यी राशिमा यस्तो प्रभाव : राशिफल / २०७७ असोज ८ गते बिहिबार
अनेक च्यालेन्ज भन्दै फेसबुकमा यति ठूलो गल्ती त गर्नुभएन, नभुल्नुहोस् सबै बर्बाद हुनसक्छ
बुधबार ७ असोज, २०७७